Ogaden News Agency (ONA) – Wararkii ugu dambeeyay ee Hawaarinta iyo arimaha Jigjiga
Wararkii ugu dambeeyay ee Hawaarinta iyo arimaha Jigjiga
Dhimashadii gacan-ku-dhiigle Meles Zanawi waxay ku noqotay dambiilayaasha Jigjiga gabi ku soo dumay. Baroortii la aamuseen waayay Cabdi iley iyo taalooyinka uu uga taagay Jigjiga iyo lacagaha faraha badan ee looga guray shacabka masaakiinta ah tacsida Meles wuxuu ugu talagalay Cabdi iley inuu kaga helo Wayaanaha gaar ahaan qoyskii Meles abaalmarin iyo inay ka difaacaan maamulka cusub oo ka soo taagan dambiyada uu Cabdi iley kagalayo shacabka aan waxba galabsan iyo sumcad dilka uu ku hayo Itobiya. Cabdi iley wuxuu ka gadi jiray Meles Zanawi sawirada shacabka uu kuu soo laayo miyiga, waxayna isaga iyo Jeneraalada uu laaluusho ka dhaadhicin jireen inay baab’iyeen ONLF oo sawirada ay tusayaana ay yihiin intii ugu dambaysay.
Beentii markay socon weyday, oo kooxdii Hawaarinta ay iska soo taageen inay sii wadaan dagaal ay ogyihiin ujeedada ka dambaysa ee ah laynta shacabkooda, wuxuu Cabdi iley soo alifay riwaayadii ahayd waxaan sii dayunayaa maxaabiistii ugu xadhaysnayd Jeelka ay ula baxeen Jeel Ogaden. Cabdi iley oo ah nin mashaariic badan ayaa ugu talagalay inuu ka dhex helo maxaabiista ciidan cusub oo daradar horleh qaba oo soo laaya shacabka si loo helo sawiro cusub oo laga iibiyo R/Wasaaraha Itobiya ee badalay maamulkii Wayaanaha. Waa iyadii maxaabiistii lakala saaray. Waxaana laga soo reebtay oo xera gooni ah lagu xareeyay dhalinyaro meela kala duwan laga soo qabtay oo qaarkood ay ahayeen xubno ururka ah oo la soo farfiiqay. Dhalinyaradaa ayuu Cabdi iley ka wada saxiixay inay noqdaan maxaysatada Hawaarinta hadday doonayaan in laga sii daayo xabsiga. Hadday diidaana aan dib dambe loo arki doonin. Dhalinayara kor u dhaafaysa 300 ayaa tababar loo furay ku saabsan siduu horey noogu sheegay maqaalkii uu qoray Faysal A. Cabdi in maskaxda lagaga shubo inay dilaan qofkii shacab ah oo kaga soo baxa meel lagu dagaalamay ama lagu tuhmayay ONLF, gabdhahana ay kufsadaan.
Dhalinyaradaa oo si fiican u qaatay tababarkii loogu talagalay ayaa markii loo xidhay oo la geeyay goobihii loogu talagalay inay ka qaadaan gulufka sawir qaadka ah ayaa kala yaacay oo dhamaantood baneeyay Xeradii loo dhisay. Intoodii badnayd waxay ku soo biireen naftood-hurayaasha CWXO, qaar kalena waxay u dhaqaaqeen dawladaha dariska ah. Waxaa goobtii ku soo hadahay dhalinyaro aan ka badanyn 30 qof oo loo soo qaaday Jigjiga iyo in aan badnayn oo la soo qabtay iyagoo sii socda.
Arimahaa ayaan idiinkaga haynaa filimo laga soo duubay qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo baxsatay maxaysatada Hawaarinta oon soo dayn doonaa marka aan soo dhamaystirno.
Waxaa kaloo maalmahan madaxa iskula jiray ciidanka Itobiya iyo kooxdii Itixaadka (Ajo-gudhay) ka soo xarootay oo Afartameeyo ahaa oo meel Godey korkeeda ah ku xareysnaa. Arintaa ayaa ka dhalatay markii ciidanka Itobiya ay heleen xogo dhab ah oo muuijnaya inay jiraan xidhiidh hoose oo ka dhex bilowday kooxdan iyo Al-Shabaab. Ka dib waxaa la amray in hubka laga dhigo isla markaana ay ku dhex milmaan Hawaarinta, taasoo ay diideen. Waxaa hadda la’isugu keenay Jigjiga halkaasoo loogu yeedhay Ibraahim dheere inuu kula hadlo inta aan laga qaadin talaabo aanay mahdinin. Waxaa kaloo soo baxay warar hoose oo sheegaya in uu khilaaf xoogan ka dhex socdo oyna badankoodu ku jacsaneeyn ama u bogin qaabsocodka Sheekh Ibraahin iyo kuwa kalee madaxda ururkaas sheeganaya, waxaayna ku eedeeynayaan inuu shaqaale hooseed iyo jaajuus u noqday Cabdi iley.
Iskusoo wada duub, waxaa jiray 2dii todobaad ee la soo dhaafay akhbaaro muhiim ah oo naga soo gaadhay xafiisyada Jigjiga wararkaa oo muujinaya wareerka haysta kooxdaa. Waxay u badan yihiiin warar sirculus ah oon waqtiyada ku haboon idinla socodsiin doono.